သူဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူဖြစ်လို့ ဒလန်တစ်ယောက် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပေးဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုလာတဲ့ ဂျင်းကောင် – Shwe Likes
သူဟာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူဖြစ်လို့ ဒလန်တစ်ယောက် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပေးဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုလာတဲ့ ဂျင်းကောင်
ပြည်သူချစ် အနုပညာ ရှင်တစ်ယော က်ဖြစ်တဲ့ မင်းသားေ ချာမြင့်ြ မတ်ဟာဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားပေါ င်းများစွာကို ပီပြင်ပို င်နိုင်အောင်သဘာဝ ကျကျသရု ပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အတွက်ေ ကြာင့် ပရိတ်သ တ်တွေရဲ့ ပါစပ်ဖျားမှာ မြင့်မြတ်ဆိုပြီး အခုချိ န်ထိရှိနေ တာပဲဖြစ်ပါတယ်ေ နာ်.။ သရုပ်ဆော င်ပိုင်းမှာပီပြင် ပိုင်နိုင်လွန်း တဲ့ မြင့်မြတ်က ဇာတ်ကားတ စ်ကားချင်းစီ တိုင်းကိုလည်း ပရိတ်သတ်ေ တွရဲ့ ရင်ထဲ ထိရောက်အောင်သရု ပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အ တွက် ဗိုလ်အောင်ဒ င်ချစ်သောမိန်းမ များကား မှာ စတင်ပြီး ဂျင်းကောင် ဆိုပြီး နာမည် တွင်နေတာပဲဖြစ် ပါတယ်…။
ဒလန်တစ်ယောက် လုံးဝမဟုတ်ကြောင်း ယုံကြည်ပေးဖို့ပရိတ်သတ်ကို တောင်းဆိုလာတဲ့ ဂျင်းကောင်
လတ်တလောြ ဖစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအြေ ခအနေ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အစပိုင်းမှာတော့ နွေဦးတော်လှ န်ရေးတို က်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူလူထုနဲ့အတူ တက်ကြွစွာပါဝင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ ငြိမ်ချက်သားကော င်းနေတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက အွန်လိုင်း အသုံးြ ပုသူတွေကြားေ ရပန်းစားခဲ့တဲ့ စစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့ သင်္ကြ န်ပွဲတော်မှာ အနုပညာရှ င်တစ်ချို့ တက်ရော က်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မြင့်မြတ်ကလည်းပါ ဝင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိတ်သတ်ေ တွက စိတ်ဆိုးဒေါသထွ က်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်..။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့ကိုမယုံြ ကည်ကြတော့ပဲ ဒလန်လို့ထ င်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်ေ တွကို အခုလိုပဲရှင်းပြလာ ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
မြင့်မြတ်က”တစ်နိုင်ငံလုံး အရေးအခင်းဖြ စ်နေချိန် ပြည်သူအားလုံးဖိ အားပေါင်းများစွာအော က်မှာ မြေစာပင်ဖြစ်နြေ ကတာပါ…. ကျွန်တော်လ ည်း ပြည်သူထဲက ပြည်သူတစ်ယောက်ပါ “မြေစာပင်” တစ်ပင်ပါပဲ… ကျွန်တော် လုံးဝ လုံးဝ “ဒလန်” မဟုတ်ပါဘူး…ယုံကြည်ပေးပါ 🙏🙏🙏” ဆိုပြီး သူ့ ရဲ့လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ တစ်ဆင့် ပရိတ်သတ်ကို ရှင်းပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေး တဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ေ ယာက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူး တင်ရရှိပါတယ်နော်…။
ျပည္သူခ်စ္ အႏုပညာ ရွင္တစ္ေယာ က္ျဖစ္တဲ့ မင္းသားေ ခ်ာျမင့္ျ မတ္ဟာဆိုရင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ ကားေပါ င္းမ်ားစြာကို ပီျပင္ပို င္နိုင္ေအာင္သဘာဝ က်က်သ႐ု ပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အတြက္ေ ၾကာင့္ ပရိတ္သ တ္ေတြရဲ့ ပါစပ္ဖ်ားမွာ ျမင့္ျမတ္ဆိုၿပီး အခုခ်ိ န္ထိရွိေန တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေ နာ္.။ သ႐ုပ္ေဆာ င္ပိုင္းမွာပီျပင္ ပိုင္နိုင္လြန္း တဲ့ ျမင့္ျမတ္က ဇာတ္ကားတ စ္ကားခ်င္းစီ တိုင္းကိုလည္း ပရိတ္သတ္ေ တြရဲ့ ရင္ထဲ ထိေရာက္ေအာင္သ႐ု ပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့အ တြက္ ဗိုလ္ေအာင္ဒ င္ခ်စ္ေသာမိန္းမ မ်ားကား မွာ စတင္ၿပီး ဂ်င္းေကာင္ ဆိုၿပီး နာမည္ တြင္ေနတာပဲျဖစ္ ပါတယ္…။
လတ္တေလာျ ဖစ္ေပၚေနတဲ့ နိုင္ငံေရးအေျ ခအေန နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အစပိုင္းမွာေတာ့ ေႏြဦးေတာ္လွ န္ေရးတို က္ပြဲႀကီးမွာ ျပည္သူလူထုနဲ ႔အတူ တက္ႂကြစြာပါဝင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ၿငိမ္ခ်က္သားေကာ င္းေနတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက အြန္လိုင္း အသုံးျ ပဳသူေတြၾကားေ ရပန္းစားခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ကက်င္းပတဲ့ သၾကၤ န္ပြဲေတာ္မွာ အႏုပညာရွ င္တစ္ခ်ိဳ႕ တက္ေရာ က္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအထဲမွာ ျမင့္ျမတ္ကလည္းပါ ဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေ တြက စိတ္ဆိုးေဒါသထြ က္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..။ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ကိုမယုံၾ ကည္ၾကေတာ့ပဲ ဒလန္လို႔ထ င္ေနၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ေ တြကို အခုလိုပဲရွင္းျပလာ ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္.။
ျမင့္ျမတ္က”တစ္နိုင္ငံလုံး အေရးအခင္းျဖ စ္ေနခ်ိန္ ျပည္သူအားလုံးဖိ အားေပါင္းမ်ားစြာေအာ က္မွာ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနၾ ကတာပါ…. ကၽြန္ေတာ္လ ည္း ျပည္သူထဲက ျပည္သူတစ္ေယာက္ပါ “ေျမစာပင္” တစ္ပင္ပါပဲ… ကၽြန္ေတာ္ လုံးဝ လုံးဝ “ဒလန္” မဟုတ္ပါဘူး…ယုံၾကည္ေပးပါ 🙏🙏🙏” ဆိုၿပီး သူ႔ ရဲ့လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာကေန တစ္ဆင့္ ပရိတ္သတ္ကို ရွင္းျပလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖတ္ရႈေပး တဲ့ပရိတ္သတ္တစ္ေ ယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို အထူးပဲေက်းဇူး တင္ရရွိပါတယ္ေနာ္…။
Source ; Myint Myat ‘s Facebook Page
Flowmeter တစ်လုံး ကို မတန်တ ဆဈေး (၂၂၀၀၀၀)နဲ့ ရောင်းနေ တဲ့ သူတွေကို ကြည်ပီး မယုံနိုင်အော င်ဖြစ်နေရတယ် ဆိုတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
မိခင်ကြီး နဲ့ အတူ စားဝတ်နေရေး အတွက် စားသောက် ကုန်လုပ် ငန်းလေးလုပ်ကို င်နေကြတဲ့အေ ကြာင်းေြ ပာပြလာတဲ့ အစ္စဏီ (ရုပ်သံ)
ထောက်ကြံတိုးဂိတ်မှာ ကားစစ်ခံရပြီး ကားပေါ်မှာ ဓားသုံးချောင်း မိသွားတဲ့ ထူးအယ်လင်း
ရုပ်ရှင်ေ လာက ကြီးကို စိတ်နာ သွားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် နဝရတ် ရဲ့ အကြောင်းအရင်း အမှန်